Hotmail မေးလ်ကိုဖန်တီးပါ။ Windows Live ID ဖြင့် Update လုပ်ပါ Gadget သတင်း
Hotmail မှာအီးမေးလ်တစ်ခုဖန်တီးပါ အရမ်းလွယ်တယ် ဒါပေမယ့် Windows Live ID ဖြန့်ချိပြီးကတည်းကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကပြောင်းလဲသွားပြီးလူအများကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိကြဘူး Hotmail တွင်အီးမေးလ်တစ်ခုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပါ.
1 Hotmail မှာအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနည်း။
4 Outlook အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနည်း
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Windows Live ID အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ငါတို့ရိုက်ထည့်ရုံပါပဲ ဒီစာမျက်နှာ.
နောက်အချက်တစ်ခုမှာသူကသင့်ကိုမေးတယ် သင်သည်သင်၏ session ကိုဘယ်လိုစတင်ချင်ကြဘူး။ ၎င်းသည်သင်၏ Hotmail အီးမေးလ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ Windows Live အကောင့်အတွက် login ကဲ့သို့သင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်“ သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာအသစ်တစ်ခု” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အဲ့ဒီ့ကိုသင်နှိပ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏အသုံးပြုသူ၏အမည် (ရွေးချယ်စရာမရှိသေးသမျှ) ကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုသည့်မီနူးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ သင်ဖန်တီးလိုသည့် domain ကို။ ယခုအချိန်တွင် @ outlook.es, @ outlook.com, @ hotmail.es, @ hotmail.com သို့မဟုတ် @ live.com တွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်အကြိုက်ဆုံးဒိုမိန်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ အရင်က Hotmail မှာသာရနိုင်တယ် ယခုတွင်သင်သည်၎င်းကို Outlook သို့မဟုတ် Live တွင်ရရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သည်။
၎င်းကိုပြီးသည်နှင့်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များကိုသာပြီးစီးရန်ကျန်ရှိသည် မည်သည့်ပြproblemနာမဆိုသင့်အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူပါ (စကားဝှက်ပျောက်သွားပြီးအကောင့် hacking စသည်) သင်ညွှန်ပြရန်သာလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
una သီးခြားအီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီနေရာမှာမင်းရဲ့အကောင့်ကို gmail, yahoo.es (သို့) တက္ကသိုလ်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ရဲ့အီးမေးလ်ထဲမှာသုံးနိုင်ပါတယ်
သင်သည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန် Captcha ဖြစ်သည်
Microsoft သည်အခြားကုမ္ပဏီများနည်းတူ Windows Live အတွက်စာရင်းသွင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည် ၎င်းသည်အလိုအလျောက်မှတ်ပုံတင်သောစက်ရုပ်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းငယ်ပုံပျက်နေသောဇာတ်ကောင်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင့်အားထပ်ခါတလဲလဲပြောရန်တောင်းဆိုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လူသားများသာထိုဇာတ်ကောင်များကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးမှန်ကန်စွာပြန်လည်ရေးနိုင်သည်။
သင်ဒီမှာရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တရားဝင်ဝါကျအားလုံးကိုလက်ခံပြီး I accept button ကိုနှိပ်ပါ Hotmail အကောင့်အသစ်.
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် Outlook အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ ယခု Hotmail မရှိတော့ပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ထားသော link တွင်၎င်းကိုတစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ဆောင်ရန်လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Hotmail အီးမေးလ်ဖန်တီးပါ
iPhone 6s Plus အသစ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း